जहाँ छन्, सबै भन्दा राम्रो संग्रहालयहरु मा युरोप | एक ट्रेन बचत गर्नुहोस्
घर > यात्रा युरोप > जहाँ छन्, सबै भन्दा राम्रो संग्रहालयहरु मा युरोप
(पछिल्लो पटक अपडेट गरिएको: 27/11/2020)
तपाईं कहाँ सोच छ भने युरोप मा सबै भन्दा राम्रो संग्रहालयहरु पाउन, हामी तपाईंलाई ढाकिएको छ! कि यो छ कला, राष्ट्रिय, वा प्राकृतिक इतिहास, हाम्रो सूची बाट संग्रहालयहरु तपाईं विस्मित गर्न असफल छैन.
के थप छ, तपाईं सबै यी पुग्न सक्दैन रेल द्वारा गन्तव्यहरू यदि तपाईंले खोजिरहेको यात्रा को किफायती हालतमा. तिनीहरूलाई कहाँ पाउन हामीलाई युरोप मा सबै भन्दा राम्रो संग्रहालयहरु नियालेर गरौं र:
louvre संग्रहालय, पेरिस, फ्रान्स
को Louvre युरोप र संसारको सबैभन्दा प्रसिद्ध संग्रहालयहरु मध्ये एक हुन सक्छ. यो सबै भन्दा ठूलो छ, को क्षेत्र कभर गर्दै 72,735 मीटर बर्ग. यो शानदार संग्रहालय भन्दा बढी घर छ 35,000 वस्तुहरू र पेरिस को स्थलहरू मध्ये एक छ. तपाईं यदि यो भ्रमण गर्न रेल द्वारा पेरिस यात्रा!
Venaria Reale, Turin, इटाली
यो दरबार को नाम ल्याटिन आउँछ शाही शिकार छ, अर्थ "शाही शिकार". १th औं र १ 18 औं शताब्दीमा, यो को शिकार expeditions लागि आधार थियो ड्यूक चार्ल्स ईम्यानुएल द्वितीय. अब दरबार यसको बारोक-शैली सौन्दर्य साथ आधुनिक आगंतुकों enchants. तपाईं नाइस मा आफैलाई मिल यदि तपाईं यो सम्झना गर्न सक्दैन.
स्ट्रिम गरेर संग्रहालय, एन्टवर्प, बेल्जियम
स्ट्रिम वा MAS गरेर संग्रहालय आन्ट्वर्प मा सबै भन्दा ठूलो संग्रहालय छ. तपाईं एक खोजिरहेको भने मनोरम view, त्यहाँ निःशुल्क पहुँच छ छत संग्रहालयका. MAS को जटिल पनि छ एक रेस्टुरेन्ट र यो तल क्याफे. तपाईंलाई भने संग्रहालय नै राम्रो र यात्रा लायक छ एन्टवर्प.
बाइबलीय, एम्स्टर्डम, नेदरल्यान्ड्स
को अर्को संग्रहालय नेदरल्यान्ड्स, द बाइबलीय संग्रहालय मा स्थित छ एम्स्टर्डम. के तपाईं बाइबल बारेमा थप जान्न चाहनुहुन्छ भने यो युरोप मा सबै भन्दा राम्रो संग्रहालयहरु मध्ये एक छ. भ्रमण Bijbels डच समाज मा बाइबल महत्त्व र प्रभाव बुझ्न मद्दत गर्छ. यो पक्कै पनि एक अद्वितीय संग्रहालय छ, प्रेम गर्नेहरूका लागि राम्रो-अनुकूल धार्मिक इतिहास.
Kunsthistorisches संग्रहालय, भियना, अस्ट्रिया
Kunsthistorisches संग्रहालय मा सबै भन्दा राम्रो-ज्ञात कला संग्रहालय छ अस्ट्रिया, पनि ललित कला को संग्रहालय रूपमा ज्ञात. यसको सबै भन्दा प्रसिद्ध प्रदर्शित केही रेम्ब्रान्टका कामहरू समावेश, माइकलएन्जेलो, रफएल, र Rubens. यसको सुरुआत भएदेखि नै यो कला प्रेमीहरूको लागि भव्य कलाको साथ अद्भुत छ 1891. भ्रमण जो कोहीले रेल द्वारा भियना कुनस्थिस्टोरिश्च म्यूजियम हेर्न को लागी व्यवस्था गर्नु पर्छ.
MACHmit बच्चाहरु संग्रहालय, बर्लिन, जर्मनी
बच्चाहरु संग यात्री लागि, यो भन्दा कुनै पनि राम्रो प्राप्त गर्दैन MACHmit बच्चाहरु संग्रहालय जर्मनी. तपाईं बर्लिन आफूलाई पाउन भने, जाँच गर्न निश्चित MACHmit र बनाउन यसको विभिन्न आकर्षण को. तिनीहरूले साथै वयस्क लागि उपयुक्त हो, यस्तो कला प्रयोगशाला धेरै रोमाञ्चक गतिविधिहरु संग, मुद्रण कार्यशाला, र चढाई labyrinth.
Skansen खुल्ला एयर संग्रहालय, स्टकहोम, स्वीडेन
Skansen खुला हावामा संग्रहालय स्वीडेन मा आफ्नो तरिका को पहिलो थियो. यसलाई खुलेको 1891 र स्टकहोम मा सबै भन्दा प्रसिद्ध संग्रहालय हुन हुर्किसकेका छ. शाही Djurgarden देखि एक भव्य दृश्य भ्रमण Skansen गर्न बोनस छ. र ती लागि जो स्कैनडिनेविया-मूल जनावर देखेर प्रेम, त्यहाँ चिडियाखाना छ यसले तिनीहरूलाई प्रदर्शन गर्दछ.
युरोप मा सबै भन्दा राम्रो संग्रहालयहरु तपाईं पर्खिरहेका छन्. तपाईं जान तयार छन् भने, आफ्नो रेल टिकट बुक अहिले र सवारी आनन्द!
के तपाइँ तपाइँको साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन र बस सक्नुहुन्छ यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन, वा यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-museums-europe%2F%3Flang%3Dne- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#संग्रहालयहरु	#यात्रा युरोप	युरोप यात्रा	युरोट्रिप	संग्रहालय	यात्रा	यात्रा अस्ट्रिया	यात्रा फ्रान्स	यात्री जर्मन	travelnetherlands	यात्रा टिप्स
ट्रेन द्वारा Tomorrowland कसरी प्राप्त गर्न
ट्रेन यात्रा बेल्जियम, ट्रेन यात्रा सल्लाह